Maxaa laga bartay guushii Real Madrid ay ku gaartay Finalka Champions League | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Maxaa laga bartay guushii Real Madrid ay ku gaartay Finalka Champions League
Maxaa laga bartay guushii Real Madrid ay ku gaartay Finalka Champions League
Posted by: radio himilo May 4, 2016
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa celcelis ahaan 1-0 uga badisay labadii lug oo afar dhammaadka ay la cayaareen kooxda Manchester City.
Kulanka lugtii koowaad oo Etihad ka dhacay, barbaro goolal la’aan ah ayuu kusoo dhamaaday, hayeeshee cayaartii Bernabue ka dhacday Bale ayaa ku qasbay daqiiqaddii 20aad goolka qura ee 180ka daqiiqo dhashay inuu iska dhaliyo Fernando oo qadka dhexe Citizens uga cayaara.
Sergio Aguero kubadda kuma uusan dhextaaban xerada ganaaxa, labada lugba. Manchester City ayaana keliya labo darbo oo toos ah ku riday kooxda Los Blancos labada kulan ee afar dhammaadka, labadaa darbana waxaa riday Kevin De Bruyne.
City ayayna ciqaab ugu filneyd in daqiiqaddii siddeedaad uu garoonka dhaawac uga baxay hogaamiyahooda Vicent Kompany, waana markii afaraad oo xiddigan uu dhaawac garoon uga baxay xagaagan.
Real Madrid ayaa markeedii 14aad Final timid koobka European Cup/Champions League, mana jirto koox kale oo sidaa sameysay.
Waa goortii saddexaad oo kooxo isku dal ah ay Finalka Champions League isugu yimaadaan afar sano gudihiisa.
Real Madrid ayaa guuleysatay xagaagan lixdii kulan oo Bernabue ay Champions League ku dheeshay, dhammaan kulamadaa gool lagama dhallin.
Cristiano Ronaldo ayaa dheelay kulankii 17aad oo afar dhammaadka UCL ah, wuxuuna barbareeyay diiwaan habeen kahor uu sameeyay Xabi Alonso.
Aguero ayaan gool dhallin shantii kulan oo ugu danbeysay oo uu cayaaray Champions League.
522 daqiiqo oo Champions League uu cayaaray Sergio Aguero, weli ma uusan ridin hal darbo oo toosan.
Keylor Navas oo xagaagan 12 kulan Champions League cayaaray, ayaa shabaqiisa gool ka dhowrtay 11 goor.
Markii saddexaad oo xiriir ah ayay Citizens u weysay kasii mid ahaanshiyaha UCL kooxaha reer Spain.
Zidane ayaa noqday macallinkii saddexaad oo sanadkiisii u horeeyay ee Champions League gaaray Finalka tartankan, waxaa uga horeeyay oo labadii sano ee tagtay sidaa kala sameeyay hogaamiyaasha Barcelona iyo Atletico Madrid Luis Enrique iyo Diego Simeone.
Previous: Heegan iyo Saxafi oo barbaro isla dhaafi waayay
Next: Dhageyso: Barnaamijka Daraasaadka Dunida